ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ငါတို့ တိုင်းပြည် အမှောင်ကျခဲ့တာ ၉ လ လွန်ခဲ့ပြီးနောက်... ရောင်နီလာခဲ့ပြီ...
Eain Mat Myrr
သိပ္ပံမောင်၀ မှ ပေးစာများ (27.11.1941)
ကျမအဘိုးရဲ. လက်ရေးနဲ. ကျမအဘွားဆီ ပို့ခဲ့တဲ့စာတွေကို ရေးစုရင်း တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ Lady Innes C. Magwe 27 th Nov: 1941 မြင့် ကနေ.တော့ တရားဟောပွဲ မရှိလို. တော်တော်နေရာကျတယ်။ အခုဘဲ ဘကြွားတို.အိမ်က ညစာစားပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ တပျော်တပါးကြီးဘဲ။ အခု ၁၁-နာရီခွဲနေပြီ။ စာရေးရင်း ပြတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့ လသာလိုက်တာ ထိန်နေတာဘဲ။ လရဲ.အရောင်ဟာ ဧရာဝတီမြစ်အပေါ်မှာ ဟပ်လိုက်တော့ တဖြတ်ဖြတ်နဲ.နေတယ်။ ရေစီးနေတဲ့ အသံလေးကလည်း တမျိုး၊ မြေပဲလှည်းတွေကလည်း တကျွီကျွီနဲ့ နေတော့တာဘဲ။ ကိုကိုတို. စလင်း၊ ကျောက်ဆည်၊ ရွှေဘိုမှာတုံးက ကြားရတဲ့ လှည်းသံတွေလို နေတယ်။ လှည်းသမားတွေကလည်း သီချင်း တအေးအေးနဲ.၊ မြစ်တဘက်ကမ်းက တောင်တန်းကလေးကိုလည်း ရေးရေးမြင်ရရဲ.။ အဲသည်လို ကြည်နူးဘွယ်ကောင်းတဲ့ အချိန်အခါမှာ ကို ချစ်တဲ့ သားသမီး ဇနီး ဆွေမျိုးတို.ကို လွမ်းဆွတ်တဲ့ ဓမ္မတာအတိုင်း လွမ်းဆွတ်တာပါဘဲ။ ကိုကို မလာခင်က သားကလေး၊ သမီးကလေးတွေနဲ.ပျော်ပျော်ပါးပါး ကန်တော်ကြီးကို သွားကြတာတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်ရုံကို သွားကြတာတွေကို စာရေးရင်း ထင်ယောင်မြင်ယောင်နေတော့တယ်။ ကိုင်း။ ကနေ.အတွက် ဒိုင်ယာရီကလေးကို ရေးကြပါစို.။ မနက်စောစော လ္ဘက်ရည်သေ
Blog တခေတ် သေဆုံးသွားပြီလို့ ပြောသံတွေ ကြားနေရတော့ ကိုယ့် blog လေးဆီ ပြန်ထ မိခဲ့တယ်။ ခေတ်ကုန်သွားတာမဟုတ်ပဲ ရွေ့လျှောသွားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် စာရေးဖို့ motive တွေ အကြောင်းအရာတွေ အချိန်တွေက တခြား လူမှုရေးကွန်ယက် တွေပေါ်မှာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ကြတာလား။ ဒါတွေကတော့ အကြောင်းမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပို့စ်တခု တင်နိုင်ဖို့က အချိန်တခုတော့ အသေအချာ လိုအပ်နေတာပါ၊ ကိုယ်ကတော့ အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံရရင် တိတ်တဆိတ် စာရေးနေရခြင်းကိုပဲ နှစ်သက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကိုယ်ရေးတာက ကိုယ့်စိတ်ထဲ ရှိတာတွေ တွေးမိပြီး အစာမကြေတာတွေလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ ခံစားမှုက စေ့ဆော်လို့ စာရေးဖြစ်သွားတာကတော့ အသေချာဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်မိသားစုတွက်၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေတွက်..... ကိုယ်ပြောချင်တာတွေ ပြောနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ် ဘလော့ဂ်မှာ စာရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တခါတလေတော့လည်း မှတ်တမ်းတင်ထားချင်လေးတွေပေါ့။ အခုလည်း ကိုယ့်စိတ်ထဲ တင်းကြပ်နေတာ တချို့ ဖြေလျော့ဖို့ ကိုယ် ဘလော့ဂ်ထဲ ပြန်ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ အခုလောလောဆယ် နားမလည်နိုင်တာတွေ ရှိလို့ပါ။ တခါတခါတော့ လူတွေက ကိုယ့်ရှုထောင့်ကပဲ ကိုယ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ပြီးရောလို့ ထ
မနေ့က ဘာရယ်မဟုတ် တီဗွီရှေ့ ထိုင်ရင်း Sister's keeper ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေး ကြည့်မိခဲ့တယ်။ ကင်ဆာဝေဒနာသည် သမီးကြီးအတွက် မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ကူညီပေးဆပ်ခဲ့ကြပုံတွေ.. မိခင်တယောက်အနေနဲ့ သမီးအသက်ကို ဆွဲဆန့်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ တခြား ဘယ်သူ့က်ုမှ ဘယ်အရာက်ုမှ ထည့်မတွက်တော့တဲ့ ပြင်းပြထက်သန်တဲ့ ဆန္ဒ... နောက်ဆုံး ကာယကံရှင် သမီးက သူ့တွက် ထိခိုက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုတွေအပေါ် ကျေးဇူးတင်အားနာရင်း သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့သာ တောင်းဆိုလာတော့တယ်.. ဆက်စပ်ရင်း ပုံ့လေးကို သတိရမိတယ်... ဘဝတွေ..... ဒီနေ့မနက် သမီးသူငယ်ချင်းရဲ့ အမေ အသုဘ လိုက်ပို့ဖြစ်တယ်။ သိပ်ထက်မြက် ဖြတ်လတ် သွက်လက်တဲ့လအမျိုးသမီးပေါ့... အနာဂတ်ကောင်းတွေ (သူ့အတွက်သာမက) အသိုင်းအဝိုင်းကိုပါ မျှဝေမြှင့်တင်ပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီး... ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျက်မှန်းတန်း သိကြရုံဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ ထက်မြက်သွက်လက်တာတွေကို သဘောကျ အားကျခဲ့တယ်... inner က လာတဲ့ စိတ်အားတက်ကြွ ယုံကြည်လှုပ်ရှားမှုတွေ.... သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဘဝလေးရယ်...အဲဒီလိုပဲ ကြည့်နေရင်းနဲ့ သမီးငယ်က သူ့သူငယ်ချင်းမေမေမှာ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားတော့ ... ကိုယ် သိခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးလိုက်